colloid ကြိတ်စက်၏အလုပ်လုပ်သောနိယာမမှာကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်လှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြိတ်ဆုံမှုန်သည်သွားမျက်နှာပြင်နှစ်ခု၏ဆွေမျိုးလှုပ်ရှားမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်ခုမှာအမြန်နှုန်းဖြင့်လှည့်ပြီးအခြားတစ်ခုသည်မသေသပ်သောကြောင့်သွားမျက်နှာပြင်များမှဖြတ်သွားသည့်ပစ္စည်းများသည်ကြီးမားသောညှပ်အားနှင့်စွမ်းအားပွတ်တိုက်အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတုန်ခါမှုနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရေဝဲစသည့်ရှုပ်ထွေးသောစွမ်းအင်များ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ပစ္စည်းကိုထိရောက်စွာဖြန့်ကျက်နိုင်သည်။ emulsified၊ crushed နှင့် homogenized ပြုလုပ်နိုင်သည်။
JINGYE Colloidal Mill သည်အရည်နှင့် Semi-fluid ပစ္စည်းများကိုကြိတ်ခွဲရန်အတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁။ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း - မြေပဲ၊ နှမ်း၊ ရေခဲမုန့်၊ မုန့်၊ ယို၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ပဲပုပ်၊ ပဲပိစပ်၊ ပဲငါးပိ၊ မြေပဲနို့၊ ပရိုတိန်းနို့၊ ပဲနို့၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
၂။ နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်းများ - သွားတိုက်ဆေး၊ ဆပ်ပြာဆေး၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဖိနပ်အရောင်တင်ပစ္စည်း၊ အလှကုန်၊ ရေချိုးဆပ်ပြာ၊ ဆပ်ပြာ၊
3. ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း: ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ခြယ်ပစ္စည်း၊ ဆိုးဆေးများ၊ အင်္ကျီများ၊ ချောဆီများ၊ အမဲဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ရေနံဓာတ်ကူပစ္စည်း၊
1.Model: JYJML စီးရီး၊ ဒေါင်လိုက်အမျိုးအစား၊ JYJMF, အုပ်စုခွဲအမျိုးအစား;
4.Capacity: 0.01-1t / ဇ;
မြန်နှုန်း 5.Mixing: 2800rpm;
1. စက်သည်အစားအစာဘေးကင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကိုသေချာစေရန်သံမဏိပစ္စည်းများကို GMP စံနှုန်းနှင့်အညီအသုံးပြုသည်။
2. တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ အပူစွမ်းအင်ကောင်းမွန်စွာဖြန့်ဖြူးနိုင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၏ပြည့်စုံမှုသည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သေချာစေရန်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်နိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းသည်လှပပါသည်။ ရိုးရှင်းပါသည်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည်။ ဖောက်သည်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပါသည်။